Monday February 26, 2018 - 21:10:28 in Wararka by Super Admin
Inkastoo aanan ka tirsaneyn Qeybaha kala duwan ee uu ka koobanyahay dhaqdhaqaaqa Al-Shabab hadana waxaan jeclaystay in aan qoro maqaalkaan aan rajeynayo intii Allah igaransiiyo inan wax badan idinkaga iftiimiyo sababti igu qancisay in aan kamid noqdo
Inkastoo aanan ka tirsaneyn Qeybaha kala duwan ee uu ka koobanyahay dhaqdhaqaaqa Al-Shabab hadana waxaan jeclaystay in aan qoro maqaalkaan aan rajeynayo intii Allah igaransiiyo inan wax badan idinkaga iftiimiyo sababti igu qancisay in aan kamid noqdo kumanaanka ladhacsan shaqada iyo hiigsiga quruxda badan ee Al-Shabaab.
Tan iyo markii gumeystaha reer galbeedku dhulkeena qabsadeen kalana qeybiyeen Ummadeenu waxay raciyo u ahayd reer Galbeedka kuwaasi oo aan marna siinin xuriyad buuxda kana fasahaadiyay dariiqyada ciziga iyo guusha uuna hoggaamiyay halkii iyo sidii jiilasha danbe eey u noqon lahayeen kuwa mara dhabayaasha aabayaashood una hoggaansan iyaga,haddaba waxaa lama huraan noqotay in labadalo taariikhdaas mugdiga badan loona weecdo halkii iyo sidii lagu heli lahaa Ummadaan oo xor ah loona tiri lahaa baalasha madow ee gumeysiga iyo gunnimada.
Inkastoo aan gummeysiga la wadaagno Waddamo badan oo caddan iyo madoow leh hadana Ummadeena iyo dhulkeenaba gumeystuhu waxa uu ku yeeshay saameyn ballaaran isagoo qeybo kamid ah dhulkeenma gacanta ugaliyay gumeyste madow ah si eey ugusii jiraan dulmiga, sidoo kale gumeystuhu intii uu "Xuriyadda" siiyay uma ogolaanin iney si madax banaan uga tashadaan aayahooda iyo nuuca dowlad iyo nidaam ay dhisan lahayeen, sidaasi darteed waxaa dhulkeenna ka hana qaaday "Dowlado" aan ahayn kuwii dadka iyo dalka ee ah kuwa ku shaqeeya mabaadii'da gumeystuhu reebay oo ay hoggaaminayeen dad uu soo diyaarsaday una tababarnaa daba dhilifnimada.
Hadaba caqliga saliimka ah ee ku jira qof dhiggiisu nadiif yahay lehna damiir ka fakara aayaha umaddiisa sidaas oo kalena aan jeclayn sii joogteynta dhabbihii gumeystuhu noo jeexay wuxuu ku mashquulsanyahay sida looga bixi karo gumeysiga muuqda iyo midka aan muuqan iyo sidii loo heli lahaa dowladdii diinta, dalka, iyo dadka.
Si kaduwan dowladaha kale ee Afrikaanta ah ee xadaaradoodu uun eey kasoo bilaabatay gumeystaha lana dhacsan kuna qanacsan iney ku sii joogaan dhabbahaaas Umada Muslimka ah waxay leedahay xadaarad iyo ilbaxnimo fog kana hormarsan mida reer galbeedka sidaso kale waxa Allah fadligii ah inan heysano kitaab samaawi ah oo u noso dajiyay Allah koonka Abuuray isla markasna nala faray inan dhexdeena isku xukumno ugu noqono wixi dhexdeenna ahaada kaas oo markii aan ka weecanay ama nalanka weeciyay ku dhaqankiisa aan ka dhaxalnay dulligaan iyo in aan raaciyo u noqonno reer galbeedka.
Maxaan ku doortay Al-Shabaab?
Taariikhdu waa silsillad meerta ah taasi oo marar badan soo laalaabta lakiin matalaadaha iyo munaasibaduhu uun eey is dooriyaan. qofkii fahamsan ama arka in aanu dhabbihii aan kusoo joognay uusan ahayn midkii aan ku gaari lahayn ciziga adduunyo iyo kan aakhiro sidaas oo kalena eey lama huraan tahay in la badalo taariikhda gummeysi ee uu ku leeyahay gobolka geeska afrika isla markaasna daraaseeya hiigsiga halyeeyadi aasaasay dhaqaaqa Al-Shabaab waxaa u muuqanaya in dhabbaha ciziga iyo sharafka uu yahay Jihaadla lagu hirgelinayo dowlad soo dhicisa baadida maqan, doowlad ka dhiidhisa dulmiga lagu hayo umada Muslimka ah, dowlad u sacyisa sidii lagu xoreyn lahaa muqadasaadka Islaamka iyo sidoo kale dowlad barbaarisa cilmiga sharciga iyo midka nacfiga leh.
Al-Shabaab, marka aad kasoo gudubto dacayaatka dibadda yaalla ee aad gasho gunta hoose ee wax qabadka iyo xaqiiqda fekerka Jihadiyiinta Somalia waxaan shaki ku jirin in goortaasi aad kala ogaaneyso wax walbaa iyo waxyaabo badan oo uu cadawgu ku suurad xumeyay, sida ku dhaqanka shareecada Islaamka, nabadda iyo is dhexgalka beelaha Somaliyeed ee ka jira wilayaatka Islaamiga ah.
Mar haddii eey ahayd waxa aanu goobeynay intaas iyo inkaloo ku jira qoryaasha Al-Shabab, waxaa qalbigaagu isweydinayaa; waa maxay sababta loola dagaashanyahay Al- Shabaab haddeyba iyaga yihiin nidaamka sidaan wax u maamulaya!!???.
Marnaba si dhib yar cadawgeenu kuma ogaalanayo in shirqooladii uu soo maleegayay qarniyaal eey Al-Shabab noqoto cidda afka ciidda ugalisa ummadana ku hogaamisa seef iyo kitaab wada socda, Jihaad lagu dumiyo dowladaha dulmiga iyo fasaadka halkaasna lagu soo gabangabeeyo qarniyashii mugdiga, sidaasi darteed reer galbeedku waxay yaboohayaan naf iyo maal iyo si kasta oo eey uga hortagi karaan daadka soo qulqulaya haddii eey ahaan lahayd caada qaatayaal Soomaali ah iyo kuwa Afrikan ah oo eey siiyaan magacyo wanaagsan sida "Dowlad" iyo "Nabad ilaalin" lasoo daba dhigay warbaahin suurad xumeysa Mujaahidiinta cadawgana suuq geyn usameysa.
Inaad qaadato fikirka Al-Shabaab uma baahna inaad u safarto dhulkooda ama lagaaga sheekeeyo wanagooda lakiin uun waxaa keenaya Su'aalaha farabadan ee ku taagan maskaxdeena aan jawaabta loo heynin.
"Dowladda" Federaalka ah.
Wixii ka danbeeyay dagaalkii labaad ee dunida nuuca dowlad ee la dhisayo waxay Reer galbeedku ku xireen shuruudo badan taasi oo dowladaha tabarta yar ee kasoo hara waxa loogu yeero 'Shanta quwadood' eeysan gooni isku taagi karin dhaqaalo ahaan iyo awood ahaanba illaa iney ku tiirsato mid kamid ah dowladahaas ma ahane, intaas kuma ekeysane reer galbeedku waxay soo diyaarsadeen dad eey tababareen oo xambaarsan una hirgaliya mabaadi'daas islamarkaasna la siiyay magacyada sida "Diplomacy".
Inkastoo qaab dhismeedka dowladaha ka jira caalamka islaamka eysan ahayn kuwo u adeegaya ummadaha eey maamulan iyadoo eey ugu wacantahay habka maamul iyo awooda ay u leeyihiin iney fuliyaan ama hirgaliyaan waxa shucuubtu jecelyihiin haddana tan Soomaaliya waa mid kuwaas kasii liidata.
Markii aad si dhiifoon u fiiriso qaab dhismeedka, ficillada iyo natiijooyinkii laga dhaxlay dowladihii laga hirgaliyay muqdishu tan iyo 2000 waxay ahayeen nidaamyo maqaarsaar oo lasiiyay sharciyay iyo awood eeysan muteysan isla markaasna fulinaya arrimo xasaasi ah oo aan wax dan ihi ugu jirin shacabka Somaliyeed ee ku tabaaleysan gudaha iyo dibadda.
waxyaabihii ugu cajiibsana ee aan ka xasuusto go'aamada dowladda waxa kamid ah:-
-Dhulalka iyo meelaha ugu qaalisan dalkeena waxa daggan hay'ado shisheeye oo markii lasiinayay dhulkaas ku shardiyay in aan qof Soomaali ahi ka howlgaleyn.
-Muran lagaliyay badda Soomaaliya
-Kumanaan calooshod u shaqeystayaal iyo ciidamo shisheeye ah oo wadanka ka howlgala
-Barnaamijkii Jinsiga oo ah dabin naloo dhigay oo aan maalin uun ku dhicidoono
-Federaalka oo ah qorshe lagu kala qeybiyay dadkeena iyo dhulkenna
-Dhiibistii Abdikariim Sheikh Musse Qalbi dhagax
-Iyo mowduca hadda taagan ee ah In La tirtiro Dalka Somalia lana hoos geeyo Ethiopia.
Hadaba magaca "Dowlad" micno badan malahan mar haddii uusan ahayn mid lagu nasto looguna naaloodo madax banaani, Hormar iyo sharafka dadkeena o lasoo celiyo.
Kuma qanceysid magaca dowlad adigoo arkaya in maalinkii soo gudbaba eey gacanteena ka bexeyso madax banaanida dhulkeena kheyraadka badan iyo sidaaso kale Ethiopianka oo ku dhimanaya baadiyaha Ceeldheer si eey u carqaladeeyaan dad nabad heysta una dhisan maamulkii hoostagi lahaa.
Sidaba noo muuqata xitaa haddii dowladda federaalka ah eey qabsato si dhameystiran dalka oo dhan waxay noo yabooheysaa dullinimo uusan ku qancin midka damiirka leh, Mustaqbalka ugu fog ee ey hiigsadaan dowladaha dabadhilifka ah ee ka dhisan caalamka Islaamka waa sida Imaraadka oo ku caanbaxay fasaad, fuxshi iyo diin la'aan. ifafaalahaasi waa uu kaoso muuqday Muqdishu waxaana ka furan Club-yo iyo Hotello fisqiga ku caanbaxay.
Nooma cuntameyso iney nala noolaadan Soomaali masiixi ah illaa inaga ama iyaga mid ciidda laga hoos mariyo.
Xukaamta iyo dowladaha ka jira Caalamka islaamka uma aas aasna iney u adeegaan shucuubta ay maamulaan. qaab dhismeedka federaalka oo lagu sheegay 'Dimoqaraadi' waa mid aan sinnaba u hufneyn kuna tiirsan reer galbeedka dhaqaalana ka hesha qaramada midoobay si eey usii joogteeyan xukunkooda kufriga ah, shacabkana u duudsiyaan xaqiisa ah in uu kitaabka Rabbi lagu maamulo.
Shacabka wax dood ah uga furna nuuc dowlad ee u rabo ee waxa kaliya ee loo ogolyahay iney soo doortaan camiilkii hoggaamin nidaamkaas ridada ah kaas o Reer galbeedku awaamiirta siin lahaayeen si loo dhaqan galiyo.
Caalamka maanta in lagu gumeysto uma baahna in quwad iyo xoog laguugu qabsado lakiin waxa la adegsadaa dad muuqa Soomaali ka ah dhalashooyina ka heysta gumeystaha islamarkaasna ma jaraha u qabanaya dowladda uu gumeystuhu dhisay.
Reer galbeedku waxay isku dayayaan iney noo dhisaan nuuc dowladeed oo faashil ah taas oo shucuubtii ey qarniyaasha u dhineyd ku dadalayaan sidey ku dummin lahayeen.
Sida aad ku aragto 'Villa Somalia' waa nidaam aan wax asxaan ah u galin shacabka soomaaliyeed lana daba jooga raaf, barakac iyo iney ka xiraan waddooyinka iyo isu socodka bulshada. Haddii nabaddi ku imaaneyso habkaas waxaa nabad looga heli lahaa Afghanistan oo Rer Galbeedku laftoodu ku duuleen 17 sano ka hor, maantana eey ka maamula wax ka yar 30% waddanka iyaga in ka badan 300,000 oo askari oo eey soo tababareen.
Mar walbaa waxay sheegaan iney rabaan taageerada shacab aan rabitaankooda ku taagneen dowladdu, wax dan ahna eeysan u heynin, sidoo kalena ka hoojiyay iney u xukun tagaan kitaabka Rabi iyo Qaddaha shareecada Islaamka.
Xuuraanka hoose ee bulshada waa ineysan marnaba dooraneyn iney ka tagaan rabbigooda sidoo kalena hoos harsdaan jaahiliyadda, lakiin caburinta iyo dhaldhalaalka adduunyo ee ey yaboohayaan kaliya waxaa raaci doonaan kuwa liita ee aan lahayn dammiir damqada oo ey isaga dulqaadan gumeysiga ee Rer Galbeed.
Dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
Tan iyo markii uu maraykanku kusoo duulay Somaliya Sagaashameyadii, guud ahaan gobolka gees Africa iyo gaar ahaan Soomaaliya waxay martigalineysay dagaal biyaha guntooda ka socday oo dhexmarayay reer galbeedka iyo cumaladooda oo saf ah iyo Dhalinyaro Soomaaliyeed.
Ka bixitaankii Somalia ee huwantii "Raja so celinta" kama dhigneyn dhammaanshaha dagaalkii tooska ahaa ee ey martigalisay Mogadishu laakin waxa uu ahaa billowga nuuc cusub ah oo u maraykanku ku wajahayay kooxihii kula hardamay kagana guuleystay dagaalka tooska iyo siduu ku dhimmi lahaa khasaaraha kasoo gaarayay dagaalka tooska ah.
Maraykanku waxaa uu bilaabay adeegsiga Jawaasiis iyo dagaal ogaayaal Soamaali ah kuwasi oo ey shaqadoodu ahayd iney so qabqabtaan dadka Muslimiinta ah islamarkaasna u gacangaliyaan CIA-da kuwaasi oo xabsiyo qarsoon ugu yaaleen dalka sidaas oo kale maraakiib xabsiyo ah u fadhiyeen xeebaha Soomaaliya.
Jihaadiyiinta Soomaaliya waxa u suurta gashay sanado dulmi iyo fasaad ah ka dib iney Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kusoo dabaalaan nidaam Islaami ah kaasi oo ka careysiiyay reer galbeedka kuna qasbay iney Ethiopia kusoo hogaamiyaan Soomaaliya Hase yeshee dagaal dheer oo qaraar kadib ciidamada Ethiopia way ku adkaatay iney xamilaan dhiig baxa daran oo ku socday.
Mar kale ayay shiisheeyuhu mu'aamarad iyo shirqool culus usoo maleegen Somalida.
Dabinkan waxa ku dhacay culimo, odayaal dhaqameedyo iyo sidaas oo kale dhalinyara badan oo Ethiopia la soo hardamay sanadihii lasoo dhaafay hayeeshee ku biyo shubtay iney halkaa kasii wadaan masiirka duullaankii Ethiopia ku hungowday una hirgaliyaan damacii reer galbeedka ee ahaa in aan Soomaaliya ka hana qaadin Dowlad islaami ah.
Si looga maarmo ciidamada Ethiopia oo nacayb daran eey u qabtay Ummada Soomaaliyeed shisheeyuhu waxay soo fakareen in Ethiopia laga saaro xamar laguna soo badalo soo duulayaal Africkaan ah oo halkaa kasii dhameystira duulaanka sidoo kale iyagoo ka faa'ideysanaya Soomaalida kusoo dhacday dabinka dib u heshiisinta, reer galbeedku waxay bilaabeen dhismaha Dowlad ey hogaaminayeen xubnihii ka baxay safka jihaadiyiinta si ummada soomaaliyeed ugu malayso iney dhalatay dowladdi loo baahnaa.
lasoco Q2-aad insha'allaah
W/Q Ina ilkaweyne